Fananan-trano hofaina any Lahore, Punjab
PK mg Hiditra
Real Estate Listings: » All Others Real Estate » All Others Real Estate » PK » Punjab » Lahore » Fananan-trano hofaina any Lahore, Punjab1
Tapitra ity lisitra ity.
Karazana fifanarahana: For rent
Paositra momba ny paositra: N/a
Karazana vidiny: Monthly
Raiso ny safidinao amin'ny lisitray fananana 900 Kongo toradroa tonga lafatra. Ity trano ity dia misy sandany vola be. Eny, tsara ny nahenoanao. Ny fanananao nofinofy dia misy amin'ny vidiny 45000 Rs, ka amandriho izao! Sarotra ny mahita ny fananana manofa trano toy izao. Manentana mafy anao izahay mba handray ity tolotra ity, alohan'ny handosiran'ny olon-kafa azy! Mitady trano misy tanjona maro? Ajanony ny fikarohana bebe kokoa, satria io Lahore io dia mbola manana ny tsara indrindra. Ny fananana ao amin'ny Model Town dia ahafahanao miditra amin'ireo fotodrafitrasa sy fitaovana tsara indrindra manodidina. Ny manam-pahaizana anay dia hamaly ny fanontanianao araka izay haingana indrindra.
Fareed Malik, Aamir Malik
Voasoratra ao 5. Oct 2016
Rehefa lany io lisitra io dia tsy afaka hifandray amin'ny mpivarotra ianao.
Voasoratra ao October 5, 2016
Misafidiana sokajyResidential homes Houses Flats Rooms Townhouses HomesLand lots Residential LandCommercial Real Estate Office spacesAll Others Real Estate All Others Real EstateBusiness Directory Moving Companies Design ServicesReal Estate Agent Directory Real Estate Consultancy
For rent Amidy
Lahore (; Punjabi: لہور; Urdu: لاہور, voatondro [laːˈɦɔːr]) dia renivohitry ny faritany Pakistaney an'ny Punjab. Io no tanàna faha-2 lehibe indrindra ao aorian'i Karachi sy tanàna 18 lehibe indrindra eto an-tany. Lahore dia iray amin'ireo tanàna manankarena indrindra ao Pakistan, izay tombanana ho an'ny GDP $ 84 miliara (PPP) hatramin'ny 2019. Lahore no tanàna lehibe sy foibe ara-kolotsaina manan-tantara indrindra ao amin'ny faritany Punjab, ary iray amin'ireo liberaly ara-tsosialy, ara-pandrosoana, ary kosmopolitan city.Lahore ny niandoha dia tonga hatramin'ny fahagola. Ny tanàna dia fehezin'ny fanjakana marobe mandritra ny tantarany, anisan'izany ny Hindu Shahis, Ghaznavids, Ghurids, ary Delhi Sultan tamin'ny vanim-potoana medieval. Nahatratra ny haavon'ny famirapiratr'i Mughal teo anelanelan'ny faramparan'ny 16 sy ny voalohan'ny taonjato faha-18 i Lahore ary niasa tamin'ny tanànany renivohitra nandritra ny taona maro. Ny tanànan'ny Afsharid Nader Shah tamin'ny tanàna tamin'ny 1739 no nahalasa azy io, ary latsaka tao anatin'ny fotoam-pandavoana izy ireo rehefa nifandona teo amin'ny Afghans sy ny Sikhs. Lasa renivohitry ny Fanjakana Sikh taty aoriana i Lahore tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-19, ary namerina ny sasany tamin'ny fahalehibeazany. Lahore avy eo nampidirina tamin'ny Fanjakana Britanika i Lahore, ary lasa renivohitr'i British Punjab. Lahore dia ivon'ny hetsiky ny fahaleovantenan'i India sy Pakistan, ary ilay tanàna no toerana nisy ny fanambarana ny Fahaleovantenan'i India, ary ny fanapahan-kevitra miantso ny hananganana an'i Pakistan. Lahore dia niaina ny sasany tamin'ny korontana ratsy indrindra nandritra ny fizaram-potoana talohan'ny fahaleovantenan'i Pakistan. Taorian'ny fahombiazan'ny Hetsika Pakistan sy ny fahaleovantenany taorian'ny 1947, i Lahore dia nambara fa renivohitry ny faritany tany Punjab. Lahore dia manana fitaomana kolontsaina matanjaka amin'i Pakistan. Lahore dia foibe lehibe iray ho an'ny indostrian'ny famoahana ao Pakistan, ary mijanona ho ivon'ny sehatry ny literatiora ao Pakistan. Ny tanàna koa dia foiben'ny fampianarana any Pakistan, ary misy ny oniversite sasany ao Pakistan izay miorina ao an-tanàna. Lahore koa ny trano amin'ny sehatry ny sarimihetsika Pakistan, Lollywood, ary ivon'ny mozika Qawwali. Ny tanàna ihany koa dia mandray ny ankamaroan'ny indostrian'ny fizahan-tany any Pakistan, miaraka amin'ireo toerana mahasarika indrindra ao anatin'izany ny Walled City, ireo Moske Badshahi malaza sy ny trano fivavahana Sikh. Lahore koa dia trano fonenan'i Lahore Fort sy Shalimar Gardens, izay samy manana ny UNESCO World Heritage Site.
Ny fananana hafa rehetra
165,000 PKR / Isam-bolana
75,000 PKR / Isam-bolana
35,000 PKR / Isam-bolana
175,000 PKR / Isam-bolana
62,000 PKR / Isam-bolana
65,000 PKR / Isam-bolana
60,000 PKR / Isam-bolana
90,000 PKR / Isam-bolana
70,000 PKR / Isam-bolana
45,000 PKR / Isam-bolana
Sokajy rehetraTrano fonenanaTany maroFananana varotraNy fananana hafa rehetraBusiness DirectoryDirectory Agent Real Estate